ကျွန်တော်၊ သူမနှင့် ဧပရယ်လ်မိုးတိမ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ကျွန်တော်၊ သူမနှင့် ဧပရယ်လ်မိုးတိမ်များ
ကျွန်တော်၊ သူမနှင့် ဧပရယ်လ်မိုးတိမ်များ
Posted by သူရဿဝါ on Apr 30, 2010 in Other - Non Channelized |5comments
နောက်ပြီး … ထိုသို့ ပြောသောနေရာကလည်း တော်တော်ကို ကဗျာမဆန်လှသော နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေပြန်သည်။
ထားပါ … အရေးမကြီးလှသော ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်ကိုပြောသည့် “ချစ်တယ်” ဟူသော စကားသည် သူမ၏ စိတ်ကစားမှုတစ်ခုဖြစ်မှာ ကြောက်သည်။
ကျွန်တော့်အပေါ် သူမ တဖြည်းဖြည်း ငြီးငွေ့သွားမှာကြောက်သည်။
သို့သော် …. သူမ၏ ပြောင်ချော်ချော် အမူအယာကို မြင်ရချိန်များတွင် … ၊ သူမကို အသည်းယားမိသော အချိန်များတွင် …. ၊ သူမကို ငေးမောကြည့်ရင်း ချစ်မြတ်နိုးမှုများ ပေါ်လာချိန်တွင် … ထိုအခါတွင်တော့ သူမ၏ ဦးခေါင်းမှ ဆံပင်စလေးမျးကို ကျွန်တော် ပွတ်သပ်မိတတ်ပါသည်။
ဒါက ကျွန်တော့် စိတ်ကိစ္စဖြစ်သလို ခြွင်းချက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ယုတ်စွအဆုံး … ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက် ရေးထားသော ကဗျာ၊ စာစုများကိုဖတ်၍ သူမ လှောင်ပြောင် ရယ်မောနေလျှင်တောင် ကျွန်တော် နာကျင်ရခြင်းမျိုး မရှိပါ။ သူမ ကျေနပ်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော့် အနုပညာကို သူမ၏ ရယ်မောပျော်ရွှင်မှုနှင့် လဲလှယ်ပေးလိုက်ပါမည်။
ကျွန်တော် အလွန်ချစ်သော အနုပညာထက်ပင် ပို၍ သူမကို ကျွန်တော် ချစ်ပါသည်။
သူမဝတ်ဆင်ထားသော အဝတ်များကိုကြည့်၍ ရင်ခုန်ရှုမောနေရခြင်းထက် ကျွန်တော်ကတော့ သူမဝတ်ဆင်မည့် အဝတ်တန်ဆာသာ ဖြစ်လိုက်ချင်ပါသည်။
ကျွန်တော်က တဆိတ်တော့ အတ္တကြီးပါသည်။
တကယ်တော့ အထက်မှာ ကျွန်တော် ရှည်ရှည်လျားလျား ရေးသားခဲ့မှုများသည် ကျွန်တော့်တွင် ထိုသို့ရေးခွင့် ရှိပြီဟု မဏ္ဍပ်တိုင် တက်ပြလို၍သာ ဖြစ်ပါသည်။
နောင်တွင် မည်သို့ဖြစ်ဖြစ် …. ယခုလောလောဆယ်တွင်တော့ ကျွန်တော် သူမကို “ချစ်တယ်” ဟု ပြောခဲ့သလို သူမလည်း ကျွန်တော့်ကို “ချစ်တယ်” ဟု ပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဧပရယ်လ် ၃၀ ရက် ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ
ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ အချစ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ……..
ချစ်တယ်ဆိုတာ စကားလုံးလေး နှစ်ခုထဲပါပေမယ်.
ဒီလို ချစ်သူမျိုးရတဲ့မိန်းကလေးက အရမ်းကံကောင်းတဲ့သူပဲဆိုတာ ပြောစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး……….
“တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချစ်ကြခြင်း ဆိုသည်မှာ ထိုသူနှစ်ဦး၏ အရေပြားချင်း ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ကြရုံသက်သက် ကိစ္စဟု တွေးတော ပြောဆိုသူများကို ကျွန်တော် ရွံရှာပါသည်။
“နင့်ကို သူတို့ ပျော်အောင် ထားနိုင်တာထက် ငါက ပိုပျော်အောင် ထားနိုင်ပါတယ်” ”